ကောင်းချစ်တဲ့မမ( စ ဆုံး) – Grab Love Story
ရင်ထဲမှာ ထွက်လာတဲ့ အသံပါ။ အပြင်တော့ ထွက်မလာဘူး။ မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်း အူတွေ သဲတွေ ဗြောင်းဆန် သွားတယ်။ မမသီတာရယ်လေ အပြေးအလွှား ရောက်လာပြီး ကျနော့်ရှေ့ တည့်တည့်မှာ ထဘီလှန် ပင်တီ အောက်ဆွဲချလို့ ဘယ်ချိန်ထဲက အောင့်ထားမှန်း မသိတဲ့ ဆီးတွေကို တဖြောဖြော မြည်အောင် ပန်းချနေတာ။
နွေမို့ ပူတယ် ဆိုပြီး နေ့ခင်းအချိန် အိမ်နောက်က ပိတောက်ပင်ရိပ်မှာ ကြိမ်ပက်လက် ကုလားထိုင်လေး ကို စံပါယ်ရုံလေးတွေကြား ချပြီး ဇိမ်ကျနေတုန်း ဖတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ် ဆိုတဲ့ ပြေးလာတဲ့ ဖိနပ်သံ အဆုံး ကျနော့်ညာဘက် ၅ ပေလောက် အကွာ စံပါယ်ရုံဘေးကို မမသီတာ တစ်ယောက် အထက်က ပြောခဲ့သလို အန္တရာယ် ကိစ္စ လာရှင်းတဲ့ မြင်ကွင်း။
အမွှေး မဲမဲတွေကြားက ပြူးနေတဲ့ အစိကြီးနဲ့ ခုံးထနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို တအံ့တသြနဲ့ ကျနော်လဲ အသက်မရှူမိအောင် ငေးနေမိတယ်။ အသက်သာ မရှူတာ ပေါင်ကြားက ညီက အတင်း ခေါင်းထောင် ကြည့်တာ။ သေး စ ပေါက်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ဟာကို ငုံကြည့်နေပြီး ဆီးကုန်ခါနီး ဝေဒနာ သက်သာမှ ဘေးဘီ လျှောက်ကြည့်မှ ကျနော့် ကို မြင်သွားတော့တယ်။
“အို – ”
ဆိုပြီး ထရမလို ထိုင်ရမလို ပြာယာခတ်နေမှ ကျနော်လဲ မျက်နှာလွှဲဖို့ သတိ ရတော့ တယ်။ ကျနော် ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ မမသီတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရင်ကတော့ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေ သလို ညီဘွားကလဲ အလိုမကြလို့ ငိုတောင် ငိုပြနေတယ်။ အဲ့ညက အိပ်မယ် ကြံတိုင်း မမသီတာ စောက်ဖုတ်ကြီးပဲ မြင်ယောင်နေလို့ နောက်ဆုံး ရေအိမ် ဝင်ပြီး ထုပစ်လိုက်မှပဲ အိပ်လို့ ရတော့တယ်ဗျာ။ နောက်အခန်းကြမှ ကျနော်နဲ့ မမသီတာတို့ အဖြစ်ကို ပြောပြပါမယ်။
ကျနော့်အဖြစ်လေးကို အရင် ပြောခဲ့ပေမယ့်ကျနော့် အကြောင်းကို မပြောရသေးတာမို့ အရင်ဆုံး ကျနော်ရဲ့အကြောင်းလေး ပြောပါရစေနော်။ ကျနော့်နာမည်က ကောင်းပြည့်စုံ။ အိမ်ကရော ရင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပါ ကျနော့်ကို ကောင်းလို့ပဲခေါ်ကြပါ တယ်။ ကျနော့်ဖေဖေက ဦးကောင်းသော် ဌာနတစ်ခုက စာရေးကြီး တစ်ယောက်။ ဖေဖေက အသား လတ်လတ် အရပ်မြင့်မြင့် ခန့်ညား တည်ကြည်တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ မေမေကတော့ ညိုတဲ့ဘက် လိုက်တယ်။ အရပ်က ၅ ပေ ၃ လက်မလောက် ခါးသေး ရင်ချီ မိန်းမလှ အင်္ဂါနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ မေမေ နာမည်က ဒေါ်ခင်တင့်ပါ။
ကျနော့်မှာ အစ်မ တစ်ယောက် ရှိတယ်။ အစ်မ နာမည်က မေမြတ်နိူးခင်။ မမနဲ့ ကျနော်က အသက် ၇ နှစ် ကွာတယ်။ မမ မွေးပြီးတဲ့နောက် မေမေ့မှာ ကိုယ်ဝန်မရတော့လို့ နောက်ထပ် ကလေး မရတော့ဘူးတောင် ထင်နေကြတာ။
နောက်မှ ကျနော့်ကိုမွေး။ ယောက်ျားလဲ ဖြစ်ပြန် ဆိုတော့ အားလုံးက ဖူးဖူးမှုတ်ပေါ့။ မမကလဲ အဖေ အမေတွေ ဆီက အမွေ ရထားလို့ မိန်းမချော စာရင်းဝင်ပဲလေ။ မမက ဆယ်တန်း ကျတာနဲ့ ဆက်မတက်ဘဲ အပ်ချုပ် သင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အပ်ချုပ်ဆိုင်လေးကို ဈေးထဲမှာ ဖွင့်ထားနိုင်ပြီ။ တပည့်အဖြစ် ကျနော်က မမသီတာလို့ ခေါ်တဲ့ မသီတာမြင့်ကိုခေါ်ထားတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဆယ်တန်း အောင်ပြီးတာနဲ့ သူငယ်ချင်း ထွန်းနိုင်တို့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်မှာ ဝင်လုပ်ပြီး စာပေး စာယူနဲ့ပဲ ကျောင်းဆက်တက်တာ ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာ ကျောင်းသားပေါ့။ ကျနော်က အသားက အမေတူလို့ နည်းနည်း ညိုတယ်။ အရပ်က အဖေ့လိုပဲ ၅ ပေ ၈ လက်မ။ မျက်လုံး မျက်ခုံး ကောင်းကောင်း ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် မဟုတ်သော်ငြားလဲ တော်တော်များများ မိန်းကလေးတွေက မြောင်းပေးချင်နေကြတယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော့်မင်းသမီးလေး ဖြစ်လာမယ့် မမသီတာမြင့် အကြောင်း ပြောရအုန်းမယ်။ မမသီတာက ကျနော့် အစ်မနဲ့ ရွယ်တူဘဲ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတာက မမသီတာ ၁၉ အရွယ်မှာ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်နဲ့ ခိုးရာ လိုက်ပြေး ဖူးတယ်။ မိဘတွေကလဲ သဘောမတူ သူ့ယောက်ျားကလဲ ဆေးသမား နောက်ဆေးမှုနဲ့ ထောင်ကျ၊ ထောင်ထဲမှာသေ၊ ဒုက္ခတွေ ပွေပြီး အဖေအမေအိမ် ပြန်ရောက် လာခဲ့တာပေါ့။
ဘဝ အကျိုးပေး မကောင်းပေမယ့် မမသီတာ က အလှ အကျိုးပေးကတော့ မိုက်တယ်။ အရပ်က ၅ ပေ ၁ လက်မ နည်းနည်းလေး ပုတယ် ဆိုရပေမယ့် ကိုယ်အတိုင်းအတာကတော့ ၃၄. ၂၈. ၃၈ ဘာလို့ အဲ့လောက် သိရသလဲ ဆိုတော့ သူတို့တွေက စက်ချုပ်သမားတွေလေ သူများတိုင်းရင်း မိန်းကလေးပီပီ ကိုယ့်ပစ္စည်းလဲ တိုင်းကြည့်နေကြလို့ သိတာ။ မမသီတာက နှုတ်ခမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်မှာ မှဲ့လေး တစ်လုံးနဲ့ ကော့နေတဲ့ မျက်တောင် အောက်က မျက်လုံးရွဲကြီးတွေက မြင်သူ ရင်ဖိုစရာပေါ့။ မမသီတာရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးက တွဲတွဲလေး အဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို တပ်မက်စွာ စုပ်နမ်းချင်မိတယ်။
ကျနော် ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် လုပ်နေတာ တစ်နှစ်လောက် ရှိမှ မမဆီကို မမသီတာ အလုပ် ဝင်တာ။ မမဆီ အလုပ် စဝင်ထဲက မမသီတာရဲ့အလှကို ကျနော် ညိတွယ် နေခဲ့တာ။ လူကလဲ လူလားမြောက်စ အရွယ် လေတိုက်လို့ သစ်ရွက် ကြွေတာတောင် ခံစားချင်တဲ့ အရွယ်လေ။ ကျနော့်မမကို မမလို့ ခေါ်သလို သူ့ကိုလဲ ကျနော်က မမသီတာ လို့ပဲ ခေါ်တယ်။
မမသီတာက တစ်ခါ သေဖူးပြီမို့ ထင်တယ် ယောက်ျားလေးတွေကိုဆို သိပ်ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှိဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှာကိုလဲ ဂရုပြုတာ နေမယ်။ ကျနော့်ကိုတော့ မမရဲ့မောင်မို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံ ပါတယ်။ မမသီတာကို ကပ်ချင်လို့ ကြံနေဖန်နေတဲ့ သူတွေတော့ အများသား တစ်ချို့လဲ မုဆိုးမမို့ အကဲစမ်းချင်ကြတာနေမယ်။ ထွန်းနိုင်ကတောင်
“ဟေ့ကောင် မင်းအမ အလုပ်သမားက မိုက်တယ်ကွ”
“မလုပ်ပါနဲ့ကွာ သနားပါတယ်” ဆိုတော့
“မင်း သနားတာ ငါ သိတယ်” တဲ့။
ကျနော်လဲ သွားဖြဲ ပြနေလိုက်ရတယ်။ ကျနော် အလုပ် အပြန် မမကို ဆိုင်ဝင် ကြိုပြီး မောင်နှမ နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်နေကြလေ။ တစ်ခါတလေ ကျနော် ရောက်လို့ သူတို့ လက်စ မပြတ်သေးရင် ထိုင်စောင့်ရတယ်။ အဲ့အခါမျိုးဆို ကျနော့်ရှေ့မှာ ထလိုက် ထိုင်လိုက် ကုန်းလိုက် ကွလိုက် လုပ်နေတဲ့ မမသီတာကို မသိအောင် ရှိုးရတာက အလုပ် တစ်လုပ်။ ညညကျရင် အလွတ်ရနေတဲ့ မမသီတာရဲ့ကောက်ကြောင်းနဲ့ ညီဘွားကိုချော့ရတာ အခါခါ။
ပေါ်တင်လဲ မရှိတ်ရဲပြန်ဘူးဗျ။ အိမ်က အဖေ အမေနဲ့ မမက သဘောတူကြမှာ မဟုတ်မှန်း သိနေလို့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်သူ့ကို ပြစ်မှားနေတာတော့ မမသီတာ သိနေတယ်။ ဒါလဲ မိန်းကလေးတို့ တတ်အပ်တဲ့ မွေးရာပါ ပညာလား၊ ကျနော်ရဲ့ မထိန်းနိုင်တဲ့ အကြည့်ရိုင်းကြောင့်လား မပြောတတ်ဘူးဗျာ။ ကျနော် ခိုးကြည့်တာ မိသွားရင် မျက်နှာ လွှဲလွှဲ သွားတယ်။ မမတို့ ခေါ်သလိုပဲ ကျနော့်ကို ကောင်း လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။
အဲ အစက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာက အဲ့နေ့က မနက်ပိုင်း အိမ်မှာ အန္တရာယ်ကင်း ဆွမ်းကပ်တယ်။ ဘုန်းကြီး သုံးပါးပေါ့။ နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေတွေလဲ ဖိတ်ပြီး ထမင်းနဲ့ ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးတာမို့ မမသီတာက လာပြီး ဝေယျာဝစ္စ ဒါန ပြုတာ။ မနက်ခင်း တရားနာပြီး ဧည့်သည်တွေ ကျွေးမွေးလို့ နေ့လည်ထိ ဆေးကြ ကြောကြ သိမ်းကြ ဆည်းကြပေါ့။ ကျနော်ကတော့ နေ့ခင်း အရိပ်မှာ အနားယူ စာဖတ်နေတုန်း။ အိမ်ထဲက ရေအိမ်မှာ လူဝင်နေလို့ မမသီတာလဲ မအောင့်နိုင် မထိန်း နိုင်နဲ့ ကိစ္စ လာအရှင်း ကျနော့်ကို သက်သက် ပြသလို ဖြစ်သွားတာ။
အဲ့လိုဖြစ်ပြီး နောက်နေ့တွေ ဆိုင်ကို ကျနော် ရောက်ရင် မမသီတာက မျက်နှာချင်း မဆိုင်ဘူး။ ကျနော်ကလဲ သူ့မြင်ရင် သူ့ပစ္စည်းကိုပဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နေတော့တာဘဲ။ နောက်လေးငါးရက်လောက် ကြာမှ ပြန်ပြီး စကားပြောတယ်။ ကျနော်လဲ မမသီတာကို ဘယ်လို ကပ်ရမလဲ ဒါပဲ တွေးနေတယ်။ ဆိုင်မှာက မမနဲ့ ဆိုတော့ မလွတ်ပြန်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ရှေးကနည်းပဲ သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ အာ့ကတော့ စာပေးတာပဲ။ ကျနော် စာရေးပြီး မမကို ပြန်ကြိုလို့ ဆိုင်ပိတ် ကူတဲ့အခါ သူ့ခြင်းတောင်းထဲ စာထည့် ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ မမ မသိအောင် တစ်တောင် နဲ့ တွက်တော့ မော့အကြည့်မှာ ခြင်းတောင်းထဲက စာကို မေးငေါ့ ပြလိုက်တော့ မမသီတာလေ အပျိုလေး လို ရှက်ပြီး မျက်နှာလေးကို ရဲလို့။ စာပေးထားခဲ့တဲ့ ညက တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ဘူး။ မမသာ ပြန်တုန့်ပြန် လာရင် ဘယ်လို ချစ်လိုက်မယ်နဲ့ အတွေးတွေနဲ့ မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော်လို့ မနက်ကို မမမြတ်နိူး လာနှိုး ရတယ်။
“ဟယ် ထတော့လေ ကောင်း ညက မအိပ်ဘဲ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ”
တဲ့ ရင်ထဲကတော့ မမသီတာနဲ့ နှစ်ပါးသွား ကနေတာ မမ လို့ ပြန်ပြောပေမယ့် အပြင်မှာတော့ ဟီးးး လို့ ရီပြပြီး ထလိုက် ရတယ်လေ။ မနက်ဆို မမက အိမ်က အရင် ထွက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ၈ နာရီ ခွဲလောက်မှ ဆိုင်သွားတာ။ ဒီနေ့တော့ မနေ့က စာပေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေ သိချင်လို့
ဆိုတော့ မမက ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတဲ့ မျက်နှာနဲ့ အကြည့်ကို
“ကောင်း ထွန်းနိုင်နဲ့ လက်ဘက်ရည် သောက်မို့ ချိန်းထားလို့”
ဆိုပြီး အကြောင်း ပြလိုက်တယ်။ မမကို ဆိုင်ကယ်နောက် တင်ပြီး ဈေးကို လာခဲ့တဲ့ လမ်းတလျှောက် မမသီတာ ဘယ်လိုများ ကျနော့်ကို တုန့်ပြန်မလဲလို့ တွေးရင်း ရင်ခုန် နေမိတယ်။
ဆိုင်ရောက်တော့ မမသီတာက ဆိုင်ဖွင့် ထားနှင့်ပြီ။ မမနဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ ကျနော်ကို မြင်တော့ မျက်နှာ မထားတတ်သလိုနဲ့ စားပွဲပေါ်က ညှပ်လက်စ အဝတ်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်လေ။ မမက တစ်ခန်း ကျော်က သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဆီ အသွား။ ကျနော် မမသီတာနား ကပ်ပြီး
ဆိုတော့ မမသီတာက မမထွက်သွားတဲ့ဘက်ကို ကြည့်ရင်း မလုံမလဲနဲ့
“ကောင်း ညနေကြမှ စာရေးထားမယ်. သွားတော့ မြတ်နိူးသိရင် မကောင်းဘူး” တဲ့။
“အင်းပါ ကောင်း သွားပါ့မယ်.. မမသာ စာရေးထားနော်”
ဆိုတော့ ခေါင်းညိတ် ပြတယ်။ ကျနော်လဲ မျက်စိမှိတ် ပြုံးပြတော့ မမသီတာက သက်ပြင်းချပြီး ခေါင်းငုံ့ သွားတယ်။ တစ်နေကုန် အလုပ်သာ လုပ်နေရတယ် စိတ်က မမသီတာဆီမှာ။ ထွန်းနိုင်ကတောင်
“ဟကောင် ဒီနေ့ ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲဟ အလွဲလွဲ အချော်ချော်ချည်းဘဲ” တဲ့။
ညနေ အလုပ် သိမ်းတာနဲ့ ကမန်းကတမ်း ဆိုင်ကယ် ခွတော့
လို့ ခေါ်တဲ့ ထွန်းနိုင်ကို
“နောက်နေ့မှကွာ ခု သွားစရာရှိလို့”
လို့ သူ့စကားတောင် မစောင့်ဘဲ ပြောရင်း ထွက်လာ လိုက်တယ်။ ဆိုင်ရောက်တော့ မမမြတ်နိူးက
“ကောင်း ခဏ စောင့်အုန်းနော် လက်စသပ်လိုက်အုန်းမယ်” တဲ့။
ကျနော် ခေါင်းညိတ် ပြပြီး ဆိုင်ထဲက ထိုင်ခုံမှာထိုင်ရင်း မမသီတာကို လှမ်းကြည့်နေမိတယ်။ လှလိုက်တဲ့ မမသီတာရယ် ပန်းရောင် ဝမ်းဆက် အကြေသားလေးနဲ့ အောက်က ကောက်ကြောင်း အလှပန်းချီက ကြည့်မဝအောင်ပါပဲ။ မမသီတာကလဲ ကျနော့်ကို ခိုးခိုး ကြည့်နေတာကို ကျနော် သိတယ်။ ခဏနေ ဆိုင်သိမ်းတော့ ကျနော်လဲ ပစ္စည်တွေကို ကူပြီး ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ လုပ်ပေးနေတယ်။
အဲ့ချိန်မှာပဲ မမသီတာက စာရွက်ခေါက်လေး တစ်ခု မမ မသိအောင် ကျနော့်လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးသွားတယ်။ ပျော်လိုက်တာဗျာ။ ပြောမပြတတ်အောင်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အပျော်က အိမ်ရောက်လို့ အိပ်ရာထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အငွေ့ပြန်ပြီး ပျောက်သွားတော့တယ်။ မမသီတာ ရေးထားတာက
‘ ကောင်း မမ စာပြန်ရေးလိုက်တယ်နော်။ ကောင်းနဲ့ မမက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကောင်းရယ်။ မမက အကြွေပန်းပါ။ ကောင်းလိုသူ တစ်ယောက်နဲ့ မတန်တော့ပါဘူး။ မြတ်နိူးနဲ့ ကောင်းမိဘတွေကလဲ ကြည်ဖြူမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ မမကို ချစ်ရင် ကောင်း မမကို မေ့ပြီး မမထက် အစစအရာရာသာတဲ့ တစ်ခြား မိန်းကလေးကို ရှာပါ ကောင်း။ မမ ကောင်းကို ပြန်မချစ်သင့်လို့ မချစ်တာ နားလည်ပေးပါ။
သွားပြီ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာလေး ပြိုပျက်ပြီ။ ကျနော် ရင်ထဲမှာ နင့်နေတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ မမသီတာ ပြောသလို တစ်ခြား မိန်းကလေးတွေ ရှာရမလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော် ချစ်တာ မမသီတာ။ မမသီတာကို ရအောင်ချစ်မယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချပြီး ကျနော် အခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်က အောက်ကို အဆင်း မမက မြင်တော့ လက်ထဲက ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ကြည့်ပြီး
“ကောင်း မောင်လေး အဲ့ဒါကဘယ်သွားမှာလဲ” တဲ့
လို့ပြောပြီး ထွက်လာ။ ထွက်လာထဲက ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဆိုင်ကယ်ကို မမသီတာတို့အိမ်ကို ဦးတည်တယ်။ မမသီတာတို့က မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်း ကျနော်တို့က မြောက်ဘက်ပိုင်း။ ဆိုင်ကယ် ၁၅ မိနစ်လောက်တော့ စီးရတယ်။ မမသီတာတို့အိမ်ရောက်တော့ ထဘီရင်လျားနဲ့ ရေစည်ဘေးမှာ ရေချိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့ မမသီတာ။ ကျနော့်မြင်တော့ အံ့အားသင့် နေတယ်။
“ကောင်း မောင်လေး ဘာကိစ္စလဲ” တဲ့။
အိမ်ထဲက ဆိုင်ကယ်သံ ကြားလို့ ထွက်လာတဲ့ မမသီတာ အမေကိုပဲ
“ဒေါ်လေး မမမြတ်နိူးက ကိစ္စ ရှိလို့တဲ့.. မမသီတာကို လာခေါ်ခိုင်းလို့”
ဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်။ မမသီတာ အမေက
“သြော် ဟုတ်လား သမီးရေ ရေမြန်မြန် ချိုးပြီး လိုက်သွားလိုက်လေ” တဲ့။
ကျနော့်ကိုလဲ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဟင်းအိုး တန်းလန်းမို့ ဆိုပြီး နောက်ပြန်ဝင် သွားတယ်။ ကျနော် ထိုင်နေရာက မမသီတာ ရေချိုးတဲ့ နေရာကို မြင်နေရတယ်လေ။ ရေစိုလို့ ထဘီက အသားမှာ ကပ်နေတော့ ပကတိ အရှိကို မြင်နေရသလို ဖြစ်နေလေတော့ အောက်က ကောင်က ငေါထွက် လာတယ်။ အသာ ခေါင်းနှိမ်ပြီး ပေါင်နှစ်လုံးနဲ့ ညှပ်ထား ရတယ်ဗျာ။ မမသီတာလဲ ရေအမြန် ချိုးပြီး အခန်းထဲဝင် အဝတ်အစားလဲ သနပ်ခါးရေကျဲလေး လိမ်းပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ဟားး လှလိုက်တဲ့ မမရယ်လို့ ရင်ထဲက ဆိုမိတယ်။
“အမေ သမီး လိုက်သွားလိုက်အုန်းမယ်နော်”
“အေး အေး သမီး သွားသွား”
သူတို့ သားအမိတွေ အပြန်အလှန် ပြောပြီး မမသီတာက ကျနော့်ဆိုင်ကယ်ရဲ့အနောက်ကို အတက်မှာ မမသီတာဆီက သနပ်ခါးနံ့လေးက နှာဝကို လာပြီး မိတ်ဆက်တယ်။ တစ်ခါတလေ ဒီလိုပဲ မမမြတ်နိူးက ခေါ်ခိုင်းနေကြ မို့ မမသီတာရော သူ့အမေပါ သံသယ မဖြစ်ကြဘူး။
ကျနော်ကတော့ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ထွက်လာပေမယ့် အခုတကယ် သွားရမယ် ဆိုတော့ ဘယ်သွားရမှန်း မသိဘူး။ ဟိုတယ် သွားဖို့ကလဲ ကျနော်တို့က ဘာမှဖြစ်သေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသွားမယ် ဆိုတော့လဲ fb ပေါ်မှာ တွေ့သလို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာကို ညှိးနွမ်းစေတာမို့ မသွားချင်။ စားသောက်ဆိုင်တွေ ထိုင်မယ် ဆိုပြန်တော့ မမသီတာကို သိတဲ့သူတွေက ဒီမြို့မှာက အများသား။ ကိုယ့် ဟာကို တိုင်ပတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို တွေ့ရာ စီးနေတော့
“ဟဲ့ ကောင်း ဘယ်တွေ မောင်းနေတာလဲ အိမ်ကို မမောင်းဘဲနဲ့” တဲ့။
“မမ မခေါ်ခိုင်းဘူး ကောင်း ဘာသာ ကောင်း မမကို ပြောစရာ ရှိလို့ ခေါ်လာတာ”
“ဟာ ကွာ ကောင်း မကောင်းဘူးကွာ.. အဲ့လို မလုပ်နဲ့ မမကို ပြန်ပို့ပေး” တဲ့။
ရမယ် အားကြီးကြီး။ သူ့ကို ပြောစရာတွေ ပြောချင်လို့ ခေါ်လာတာကိုများ ပြန်ပို့ခိုင်း နေသေးတယ်။ သူ့ကို ပြန်မပြောဘဲ ဦးနှောက်ကို အမြန် အသုံးချ နေရတယ်။ ကြံစမ်း ဘာလုပ်ရမလဲ ဘယ်သွားရလဲ။ ထွက်စမ်း ထွက်စမ်း အကြံတွေ။ နောက်မှ သတိ သွားရတယ်။ တခြား ဟုတ်ရိုးလား။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်လေးပေါ့။
ထွန်းနိုင်တို့က ဆိုင်နဲ့ အိမ် တွဲထားပေမယ့် အိမ်နဲ့က နည်းနည်း လှမ်းတယ်။ ညဆို ဆိုင်ထဲမှာ ထွန်းနိုင်ပဲ စောင့်အိပ်တာ။ သူ့မိသားစုတွေက အိမ်မကြီးမှာပဲမို့ လွတ်လပ်တယ်လေ။ အာ့နဲ့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကို ဦးတည်လိုက်တယ်။ မမသီတာက
“ကောင်း ဘယ်ကိုလဲ” တဲ့။
မကြားချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်တယ်လေ။ ဆိုင်ရောက်တော့ နေဝင်စ အမှောင် လွှမ်းနေပြီ။ ကျနော့် ဆိုင်ကယ်သံ ကြားတော့ ထွန်းနိုင်က အိမ်ကနေ ထွက်လာတယ်။
“ကောင်း ဘာလိုလို့လဲကွ” တဲ့
ကျနော်လဲ ထွန်းနိုင်လက် ဆွဲပြီး
“ဟေ့ကောင် ငါ မမသီတာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကား ပြောချင်လို့ဟ မင်းဆိုင်ထဲ ပြောလို့ ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား”
ဆိုတော့ ဒီကောင်က သဘော ပေါက်တယ်။
“ဘာလို့ မဖြစ်ရမှာလဲ.. နေအုန်း ဆိုင်သော့ သွားယူလိုက်အုန်းမယ်”
ဆိုပြီး အိမ်မကြီးဘက် ပြန်သွားတော့ မမသီတာက
“ကောင်းရယ် ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ.. ငါတော့ နင့်ယုံမိတာ မှားပြီ” တဲ့။
“ဟာ မမကလဲ ခဏလေးပါ မမနဲ့ စကား ပြောချင်လို့ပါ”
“ဒုက္ခပါပဲ ကောင်းရယ် မြတ်နိူးနဲ့ ဦးလေးတို့ အဒေါ်တို့ သိရင် မမပဲ အပြစ်ဖြစ်မှာ”
လို့ ပူပန်စွာ ပြောတဲ့ မမကို ကြည့်ပြီး သနား နေမိတယ်။ ထွန်းနိုင် ပြန်လာပြီးတော့ ဆိုင်လေး ဖွင့်ပေးတယ်။
လို့ ပြောပြီး မမသီတာလက်ကို ဆွဲလို့ ဆိုင်ထဲ ဝင်လိုက်ပြီး တံခါးပြန်ပိတ် ချက်ထိုးတာကို မမသီတာက ကြည့်ရင်း မလုံမလဲ စိုးရိမ်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ပေါ့။ ဆိုင်ထဲမှာက မီးလုံးငယ် တစ်ပွင့်ပဲ ထွန်းထားတာမို့ အလင်း အားနည်းနေတယ်။ မမလက်ကို ဆွဲပြီး ထွန်းနိုင်အိပ်တဲ့ ခုတင်မှာ နှစ်ဦးသား တင်ပါးလွဲ ထိုင်ပြီး မမလက် နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ရင်းကနေ
“မမ ကောင်းကို မချစ်ဘူးလား”
“ကောင်းရယ် မဖြစ်နိုင်တာတွေ မပြောပါနဲ့လားကွယ်”
“မမရယ် ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ.. ကောင်း မမကို ချစ်တယ်”
“ဟင့်အင်း မချစ်နဲ့ ကောင်း မမတို့ နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲရမှာ”
“ဟာ အခု မချစ်ရတာကမှ စိတ်ဆင်းရဲတာ မမရဲ့.. မမကို ကောင်း ချစ်တယ်”
လို့ပြောပြီး မမရဲ့မေးလေးကို လက်မ လက်ညှိးနဲ့ ကိုင်လို့ ဆွဲမော့ လိုက်တယ်။ မော့လာတဲ့ မမရဲ့မျက်ဝန်းက ရီဝေလို့ မဟတဟ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို ငုံခဲလိုက်မိတော့ “အင်” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်ပြီး ကျနော့်အနမ်းကို ကျေနပ်စွာ ခံယူ နေတယ်။ မမပါးစပ်ထဲ လျှာထည့်ပြီး မွှေတော့ မမကလဲ ပြန်ပြီးတော့ လျှာနဲ့ အတွန်းအထုတ် အစုပ်အဆွဲလုပ်လာတယ်။
ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့ဘူး။ နှုတ်ခမ်း နမ်းနေရင်းက မမနို့အုံပေါ်ကို လက်ရောက်ပြီး အပေါ်က ဆုပ်ကြည့်တော့ ဘရာ အပျော့စားလေးကြောင့် အိစက်စက် အရသာကို ထိတွေ့ ခံစားရတယ်။ ခါးကို လက် တစ်ဖက်ကဖက် တစ်ဖက်က နို့ကိုကိုင် နှုတ်ခမ်းကလဲ အနမ်း မပျက်ပေါ့။ နှစ်ယောက်သား အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလို့ ကာမအဆိပ်တွေ က ငယ်ထိပ် ရောက်နေပြီ။ ကျနော်လဲ အားမရတော့တာကြောင့် မမရဲ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီ နှိပ်သီးတွေကို တဗြုတ်ဗြုတ် မြည်အောင် ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။
“အို ကောင်း ရယ်”
လို့ မမနှုတ်က ရေရွတ်သံလေး ထွက်လာပြီး လက်နှစ်ဖက် နောက်ကို လျိုလို့ ဘရာချိတ်လေး ဖြုတ်ပေးတယ်။ အချုပ်အနှောင်က လွတ်လာတဲ့ မမနို့လေးတွေက အပြင်ကို ခုန်အထွက် ကတွဒ်ပေါက်က ဗျိုင်းစောင့်သလို စောင့်နေတဲ့ ကျနော် မမရဲ့နို့သီးလေးကို ပြေးဟပ် လိုက်တယ်။
“အာ အာ့ ဟင်းး”
ဆိုတဲ့ အသံတွေ မမဆီက ထွက်လာပြီး ရင်ကော့ပြီး နို့ပေးစို့နေတဲ့ မမ တစ်လုံးစို့ တစ်လုံးကိုင်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ကျနော်တို့ အရာရာကို မေ့လို့ ကာမ အရသာကို တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ဆင့်ချင်း ရှေ့တိုး နေကြတယ်။ ကျနော့်လက်က နို့ကိုင်ရာက တစ်ဆင့် မမရဲ့ပေါင်ကြားဆီကို ဦးတည်လိုက်တယ်။ မိန်းမနဲ့ အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မလိုးဖူးပေမယ့် အပြာစာ အပြာကားတွေ ကြည့်ထားပြီး မြင်ဆရာ တင်ထားတာမို့ အခု လက်တွေ့လုပ်တော့ နည်းနည်းတော့ အဆင်ပြေသား။
ကျနော်ရဲ့ လက်က မမပေါင်ကြား ဝင်တော့ မမက အတင်း ပေါင်စိထားပြီး ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ကွာ နဲ့ ငြင်းဆန် နေတယ်။ ကျနော်က မုန်ထ နေပြီ အတင်း မမပေါင်ကို ဖြဲပြီး လက်အတင်း ထည့်တော့ နွေးနေတဲ့ မမရဲ့စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လက်နဲ့ အုပ်မိသွားတယ် စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်ဝါးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ပေး လိုက်တော့ မမရယ်လေ အီး အားနဲ့ တွန့်တွန့် သွားတာဘဲ။
ကျနော်လဲ လက်ခလည်နဲ့ ထဘီပေါ်ကနေ အကွဲကြောင်း တလျှောက် ထက်အောက် ဆွဲလိုက်တော့ ကျနော်လက်မှာ တရော် ကင်ပွန်းရည်လို အရည်တွေ လူးကုန်တယ်။ မမ ထန်ပြီး အရည် ထွက်နေတာ။ အဲ့ချိန်မှာ မမ သတိ ဝင်လာတယ်။ ကျနော်သူ့စောက်ဖုတ် နှိုက်နေတဲ့ လက်ကို အတင်း ဖမ်းဆွဲပြီးတော့
“ကောင်း မမကို ချစ်ရင်မလုပ်နဲ့ကွာ”
ဆိုပြီး အတင်း ရုန်းတာ။ ကျနော်ကလဲ
“အတင်း ချစ်လို့ပါ မမရယ်”
နဲ့ အတင်း ပြန်ရုန်းတာ။ နောက်မမက ကျနော်မျက်နှာကို သူ့လက် နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး မော့စေပြီးမှ
“ကောင်း မမကို ကြည့်စမ်း.. မမကို ကောင်း ချစ်လား” တဲ့။
“ကျနော်လဲ ချစ်တယ် မမ တအား ချစ်တာ” ဆိုတော့
“အင်း မမလဲ ကောင်းကို ချစ်တယ်.. ဒါပေမယ့် အခုတော့ မမတို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်ရအောင်နော်.. သူများနေရာမှာ မသင့်တော်ဘူး”
လို့ မမက ပြောလာတော့
“မမ တကယ် ကောင်းကို ချစ်လား” ဆိုတော့
“ချစ်တာပေါ့ ကောင်း ရယ် ကောင်းက မမကို ချစ်ရင် မမရဲ့စကား နားထောင် ရမယ်နော်” တဲ့။
ကျနော်လဲ ကလေးငယ်လို ခေါင်းလေး ညိတ်ပြတာပေါ့။ အဲ့တော့ မမက ကျနော့်နဖူးကို ရွှတ်ကနဲ့ မြည်အောင်နမ်းပြီး
“လိမ္မာလိုက်တာ အာ့ကြောင့်ကောင်းကို ချစ်တာ ကဲ ကောင်း ပြန်ရအောင်”
ဆိုပြီး အဝတ်တွေကို သေသပ်အောင် လုပ်တယ်။ မမ ရဲ့ထဘီ ဖြန့်ဝတ်တော့ အရည်တွေ ကွက်နေတော့ လှည့် ဝတ်တာကို ကြည့်ပြီး ကျနော်က ရီတော့ လူဆိုးကြောင့် ဆိုပြီး ကျနော်လက်မောင်းကို ဆွဲဆိတ်တယ်။ နာပေမယ့် မနာသလိုပဲ။ ကျေနပ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပျော်နေမိတယ်။ အဲညက မမကို သူ့အိမ် ပြန်ပို့ပြီး မိုးမမြင် လေမမြင်နဲ့ ပျော်နေခဲ့တယ်။
မမသီတာနဲ့ ကျနော် ချစ်သူတွေသာ ဖြစ်တယ် စကားလေးတောင် နေ့တိုင်း မပြောရဘူး။ ဆိုင်မှာ တွေ့တုန်း မမ မသိအောင် ခိုးပြုံးပြ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခိုးကြည့်။ ဒီလိုပဲ နေနေရတယ်။ ထွန်းနိုင်က မေးတယ်။
“ကောင်း မင်းနဲ့ မင်းမမကဘယ်လိုလဲ” တဲ့
“ဘယ်လိုမှမလဲဘူး မောင်ရေ မင်းဆီလာတဲ့ ညကပဲ နှစ်ယောက် တွေ့ရသေးတယ်” ဆိုတော့
“ကောင်း ရာ တွေ့ဖို့ ကြံအုန်းလေ.. အချစ်ဆိုတာက အမြဲ ထိတွေ့ နေမှကွ.. အနေ ဝေးရင် အေးသွားမယ်” တဲ့။
လောလောဆယ်တော့ အေးလဲ မတတ်နိုင်ဘူး။ တွေ့ဖို့ကလဲ သူလဲ သူ့အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်က အချိန်ပေးနိုင်တောင် သူက အခြေနေ မပေးနိုင်ဘူး။ မမမြတ်နိူး သိလို့ မရ အိမ်က သိလို့ မရ ဆိုတော့ ပိုဆိုး။ မမနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ တခဏတာ အတွေ့လေးကိုပဲ ပြန်လွမ်း နေရတယ်။
အဲ့လိုနဲ့ တစ်လလောက် အကြာမှာတော့ ကျနော့်ကို ကံဆရာက မျက်နှာသာ ပေးလာခဲ့တယ်။ တခြား မဟုတ်ဘူး အမေ့ရွာက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ အဖေ အမေတို့က ဇရပ် တစ်ဆောင် လှူဒါန်းထားတာ ဆရာတော်ကြီး မွေးနေ့နဲ့ တိုက်ပြီး ရေစက်ချပွဲ လုပ်မယ် ဆိုတော့ ကျနော်က လွဲလို့ အဖေ အမေနဲ့ မမမြတ်နိူးတို့ ရွာကို သုံးရက်လောက် သွားကြမယ်ပေါ့။ မမဆိုင်က ဖောက်သည် အပျက် မခံချင်တာမို့ မမသီတာကို ဆက်ဖွင့် ထားဖို့ လွှဲထားခဲ့တယ်လေ။
ဒါက ကျနော့်အတွက် အကွက် ဖြစ်သွားတယ်။ မမ မရှိတော့ မမအစား ဆိုင်ကို ကျနော်က သွားသွား ကြည့်ပေးဖို့ မမမြတ်နိူးက အမှာ ပါးခဲ့တော့ အဆင် ပြေပြီလေ။ ပထမရက်ကတော့ ကျနော် မမကို ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်ရင်းပဲ စကား ပြောရတယ်။ ကျနော် မမကို တွေ့ချင်လို့ အတင်း ပူဆာလို့ နောက်ဆုံးတော့ မမက လိုက်လျောပေးတယ်။
နေရာ ကတော့ တခြားနေရာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ အိမ်ပဲပေါ့။ အိမ်ကိုက မမသီတာက မကြာခဏ လာနေကြ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ သိပ်ဂရုမပြုဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ကျနော် သွားခေါ်လို့တော့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ကျနော်က ဆိုင်ကို တစ်ရက် ခွင့်တောင်းပြီး အိမ်က စောင့်နေလိုက်တယ်။ မမကတော့ ပုံမပျက် ဆိုင်ဖွင့်ပြီးမှ ကျနော်တို့ အိမ်မှာ အဝတ်စ ယူစရာ ရှိတယ် ဆိုပြီးဘေးက ဆိုင်ကို ဆိုင်အပ်ခဲ့ပြီး အိမ်ကို လာလိုက် အားလုံး ဒေါင့်ကိုစေ့နေရော။
မမက ၉ နာရီလောက်မှ လာမယ့်ဟာ မနက် အိပ်ရာထပြီးထဲက ကျနော် ဃဏာ မငြိမ်ဘူး။ ၈ နာရီလောက်ကျတော့ ရေချိုးတယ် ဆပ်ပြာကို အထပ်ထပ်တိုက် ညီလေးကိုလဲ သေသေချာချာ ဆေးကြောလို့ပေါ့ လက်ထဲမှာ ညီလေး ကိုင်ရင်း မမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပြန်မြင်ယောင် လာတယ်။ ဟိုညက အနမ်းတွေ အထိအတွေ့တွေကို ပြန်သတိရတာနဲ့ ထိပ်က အရည်တောင် စို့လာတယ်။ မနေနိုင်တော့တာနဲ့ တစ်ချီ ပြီးအောင် ထုပလိုက်တယ်။
၉ နာရီကျော်တော့ ထီးလေး ဆောင်းလို့ မိုးပြာရောင် ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ မမ အိမ်ထဲ ဝင်တာနဲ့ ကျနော် အပေါက်ဝကနေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ပြီး ဘယ်သူမှ မရှိတာနဲ့ တံခါးကို အမြန်ပိတ် ချက်ထိုး လိုက်တယ်။ ပြီး မမလက်ကို ဆွဲလို့ အပေါ်ထပ် ကျနော့်အခန်းကို ခေါ်လာလိုက်တယ်။ ကျနော့်အခန်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ မမကိုပွေ့ဖက်လို့ နမ်းရင်း
ဆိုတော့ မမက အဖက်မခံဘဲ
“နေပါအုန်း ကောင်း ရယ် အဝတ်တွေကြေကုန်မယ်”
“ကြေမှာ ကြောက်ရင် ချွတ်လိုက်လေ မမ”
ဆိုတော့ မျက်စောင်း ထိုးပြီး
“ဒါမျိုးကျ မသင်ရဘူး တတ်တယ်” တဲ့။
ပါးစပ်က ပြောပေမယ့် ကျနော့်အလိုတော့ လိုက်ရှာပါတယ်။ မမရဲ့အင်္ကျီနဲ့ ထဘီ ချွတ်လိုက်တော့ မမ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘရာ နီရဲရဲလေးနဲ့ ပင်တီ ပန်းရောင်လေးနဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေတဲ့ မမကို ရင်ထဲ ဆွဲသွင်းပြီး အနမ်းတွေချွေလိုက်ရင်း ခုတင်ပေါ် ဆွဲတင် လိုက်တယ်။ မမကလဲ စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ် ထင်တယ်။ လူးလွန့်လို့ ခံစားနေတယ်။
မမရဲ့ဘရာလေးကို ချွတ်ပြီး လုံးဝန်းပြီး လှပတဲ့နို့ကို ကျနော် လျှာကြမ်းနဲ့ အားရပါးရ ဆွဲဆွဲ စုပ်လိုက်တော့ မမလဲ ရှီုးရှီုး ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ ရင်ကို ကော့ကော့ ပေးနေတယ်။ မမနို့လေးက ကလေး မတိုက်ဖူးသေးတာမို့ နို့သီးခေါင်းလေးက သေးသေးလေး အဲ့ နို့သီးလေးကို ငုံလိုက် စို့လိုက် လုပ်ရာကနေ လက်က မမပေါင်ကို ဖြစ်ညှစ်ရင်း ထက်အောက် စုံဆန် သွားနေလိုက်တယ်။
မမ က အတွေ့ကြုံ ရှိပြီးသားမို့ တကယ် ခတ်ကွင်းလဲ ပြင်ရော အိနြေ္ဒသိက္ခာတွေ အကုန် ခွာချလိုက်ပြီး မမလက်က ကျနော့်ပုဆိုးဖြေပြီး လီးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ပြီး ထက်အောက် လှုပ်ရှားပေးတော့ မိန်းမရဲ့အထိအတွေ့ မခံဖူးတဲ့ ကျနော့်လီးကြီးက ဒစ်ကြီး ကားလို့ အစွမ်းကုန် ထောင်နေရော။ မမက ကျနော့်ဒစ်ကို သူ့လက်မနဲ့ ပွတ်ပြီး ဝလုံးရေး နေရင်းက
“ကောင်း ရယ် မင်းဟာကြီးက မတရားပဲ” တဲ့။
“ဘာမတရားတာလဲ မမ” ဆိုတော့
“ဟုတ်ရဲ့လား မမရယ် မမ ယောက်ျား လီးနဲ့ ဘယ်သူ ကြီးလဲ”
“ဟာ ကြာ” တဲ့။
ရှက်လို့ မဖြေတဲ့ မမကို
“ပြောပါ မမကလဲ ဘယ်သူ ကြီးလဲလို့”
“ကောင်းဟာ ကြီးတယ်” တဲ့။
ကျနော်လဲ မမရဲ့ အဖြေ ကြားတော့ ပိုစိတ်ထလာပြီး ကမန်းကတမ်း ထပြီး မမရဲ့ပင်တီကို ဆွဲချွတ်တော့ မမက ချွတ်လွယ်အောင် ဖင်ကို ကြွပေးတယ်။ ပင်တီလေး ကျွတ်သွားတာနဲ့ အမွှေး မဲမဲလေးတွေ ဖုံးနေတဲ့ မမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုက အထွတ်အထိပ် ရောက်ပြီး ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲလိုက်တော့ အစိ ပြူးပြူးနဲ့ ကာမရေကြည်တွေ ရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ကုန်းပြီး လျှာနဲ့ လျက်လိုက်တော့
ဆိုပြီး တွန့်သွားပြီး မမက သူ့စောက်ဖုတ်ကို လက်နဲ့ အတင်း အုပ်ပြီး
“ကောင်း မလုပ်နဲ့ကွာ ရွံစရာကြီး” တဲ့။
“ရွံပါဘူး မမကလဲ မမကို ကောင်းစေချင်လို့”
ပြောလဲပြော မမလက်ကို အတင်း ဖယ်ပြီး အစိ ပြူးပြူးကြီးကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်။ ညှီစို့စို့ အနံ့ နဲ့ ငံကျိကျိ အရသာ ကို ခံစားလိုက်ရပေမယ့် မမကို ကောင်းစေချင်တာရယ် ကြည့်ထားတဲ့ အပြာကား ထဲက ပညာတွေကို လက်တွေ့ အသုံးချ ကြည့်ချင်တာနဲ့ပဲ မနားတန်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျှာပြားကြီးနဲ့ လျက်လိုက် လျှာနဲ့ အထဲကို ရောက်နိုင်သမျှ ထိုးထည့်ပြီး ကစား ပေးလိုက်တယ်။ မမကလဲ ကာမစည်းစိမ်ကို မျက်လုံး စုံမှိတ် ကျနော့် ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုပ်ပြီး တအီးအီး တအားအားနဲ့ပေါ့။ ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့တာနဲ့
“မမ ကောင်း ချစ်ချင်ပြီ။ ချစ်ချင်ပြီလို့”
အသံတွေတုန် ရင်တွေခုန်ရင်း ပြောလိုက်တော့ မမက
“ကောင်း ချစ်ချင် ချစ်လေ ချစ်လေ”
ဆိုပြီး ဒူးထောင်ပြီး ပေါင်ကား ပေးထားတော့ ကျနော်လဲ ပေါင်ကြား ဝင်ပြီး မမစောက်ဖုတ်ဝကို လီးတေ့ပြီး ဆောင့်ထိုး လိုက်တယ်။ အာ့ အ လို့ မမဆီက အသံ ထွက်လာတယ်။ ကျနော် ထိုးသွင်း လိုက်တာက အထဲ မဝင်ဘဲ အပေါ်ကို ချော်ပြီး မမအစိကို ကလော် ထိုးသလို ဖြစ်သွားတာလေ။ မမက ချော်သွားတဲ့ ကျနော့်လီးကို သူကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြီး အဝကို ပြန်တေ့ ပေးတယ်။ ကျနော်လဲ ခါးအားနဲ့ နောက်တစ်ခါ ဆောင့်ထဲ့ လိုက်တော့ ဗြွတ် ဆို ဝင်သွားတယ် လီးတလျှောက်လုံး မကြုံဖူး တဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ နွေးထွေး တင်းကြပ်မှု အရသာကို ခံစားလိုက်ရသလို မမကလဲ
“အမလေး သေပါပြီ ကောင်းရယ် တအား လုပ်ရလားဟဲ့”
ဆိုတဲ့ အသံလဲ ကြားရော ကျနော့်စိတ်က ပိုထန်လာပြီး မမစောက်ဖုတ်ကို အတင်း ဆောင့်ပစ်လိုက်တာ ဆယ်ချက် ကျော်ကျော် လောက်ပဲ ရှိမယ် ထင်တယ် လီးတလျှောက် ကျဉ်သလိုလို ဖြစ်လာပြီး လီးရေတွေ ပန်းထွက်သွားတော့ လီးကို မမစောက်ဖုတ်ထဲကို အဆုံး ထိုးထည့်ပြီး အတင်း ကပ်ထားလိုက်တယ်။
မမက လင်ရဖူးတော့ ကျနော့် အခြေအနေကို သိတယ်။ ကျနော့်ဖင်တွေကို လက်နှစ်ဖက် ဆွဲပြီး ကပ်ထား ပေးတယ်။ နှစ်ယောက်သား ခဏ ငြိမ်နေပြီ အရသာ ခံနေကြတယ်။ မမက သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ငြိမ်ပြီး ဇိမ်ခံနေတဲ့ ကျနော့်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဖွဖွလေး သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆော့ကစားရင်းက
“ကောင်း မမကို ချစ်ရတာ ကောင်းလား”
လို့ မေးတော မမပါး နှစ်ဖက်ကို ဘယ်ညာ တရွှတ်ရွှတ် နမ်း ရင်း
“ကောင်းတယ် မမ တအား ကောင်းတာပဲ မမရော ကောင်းလားဟင်”
“မမ ကောင်းလုပ်တာ ခဏလေးနော်” ဆိုတော့
“အော် အာ့က ကောင်းကမှ မလုပ်ဖူးသေးတာ နောက်ကျရင် ကြာမှာပေါ့” ဆိုတော့
“မမ ကောင်း ထပ်ချစ်အုန်းမှာနော် မဝသေးဘူး” ဆိုတော့၊
“သဘော သဘော ကောင်းသဘော မမတော့ မှားပြီထင်တယ်” တဲ့။
“မမက ဘာမှားလို့” ဆိုတော့
“မှားတာပေါ့ ကောင်းရယ် ကောင်းက မမထက် အများကြီး ငယ်တယ် နောက်လူပျိုလေး မမက မုဆိုးမလေ”
“ဟင့်အင်း ကောင်း အာ့တွေ မသိဘူး မမကို ချစ်တာပဲ သိတယ်.. မမရော ကောင်းကို မချစ်ဘူးလား”
“အော် ကောင်းလေးရယ် ကောင်းလေးကို ချစ်လို့ ခုလို အလိုလိုက်မိတာပေါ့” တဲ့။
“မမ ကောင်းကို တကယ် ချစ်တာနော် မညာရဘူး”
“မညာပါဘူး ကောင်း ရယ် နေပါအုန်း ကောင်းရော မမကို ဘယ်တုန်း က စချစ်တာလဲ”
လို့မေးတော့ မမမျက်နှာလေးကို စိုက်ကြည့်ရင်းက
“ဟိုလေ မမ ကောင်းကို လာပြတုန်းက”
လို့ပြောတော့ မမ တစ်ယောက် မျက်မှောင်လေး ကြုတ်ပြီး စဉ်းစားပြီး
“နေပါအုန်း မမကဘာလာ ပြတာလဲ” တဲ့။
အဲ့တော့မှ ကျနော်လဲ ဟီးးး ဆိုရီပြီး
ဆိုတော့မှ သဘော ပေါက်ပြီး
“ဟာ ကောင်း ကွာ မကောင်းဘူး တော်တော် ဆိုးတယ်” တဲ့။
“ဟားဟား မဟုတ်ဘူးလား ကောင်းကို လာပြတာလေ”
ဆိုတော့ ကျနော့်လက်မောင်းကို မနာအောင် ဆွဲကိုက်ပြီး
“သွားးအဲ့နေ့က ရှက်လိုက်တာ မပြောနဲ့” တဲ့။
ပြောဆို နေရင်းက စိတ်ပြန်ထ လာတော့
ဆိုတော့ မမက ခေါင်းညိတ် ပြတယ်။
“မမ ကောင်း အောက်ကနေမယ်” ဆိုတော့
ကျနော် အောက်က ပက်လက် လှန်အိပ်ပေးတော့ မမက အပေါ်က ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က လီးကို ကိုင်ပြီး အဝတေ့ပြီး အသာ ဖိသွင်းတယ်။
“အာ ကောင်းရယ် မင်းဟာက ကြီးတယ်ကွာ” တဲ့။
“ကြီးတာ မကောင်းလို့လား မမ” ဆိုတော့
အဲ့အသံလဲ ကြားရော မမခါးကို ကိုင်ပြီးတော့ အောက်ကနေ ပင့်ဆောင့် လိုက်တယ်။
“အား သေပီ ကောင်းရယ် သူ့အသား မဟုတ်တိုင်း” တဲ့။
မျက်နှာလေး ရှူံ့လို့ ပြောနေတဲ့ မမကို ကာမစိတ်တွေ ထန်နေတဲ့ ကျနော် ဘာမှ မပြောဘဲ အတင်း အောက်ကနေ ပင့်ဆောင့် နေတော့တာပဲ။ မမကလဲ ပြန်ဆောင့် လိုးပေးတယ်။ ကျနော်ရဲ့အဆောင့် နားချိန်ဆို မမက ကြိတ်ပြီး ပွတ်တာ ခံလို့ ကောင်းလိုက်တာ။ လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲ အဆုံးထိ ထည့်ပြီး ဝိုက်ဝိုက်ပြီး ကြိတ်တာက မမအစိကိုချေသလိုမို့ ထင်တယ် မမ တအား ကြိုက်ပုံပဲ။
မမနဲ့ ကျနော် အဲ့နေ့က သုံးချီ သုံးလား လိုးကြတယ်။ ပြီးရေမိုးချိုးပြီး မမမြတ်နိူးရဲ့မှန်တင်ခုံက ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြန်ပြင်ပြီး မမလဲ ဆိုင်ကို ပြန်တယ်။ နောက်မို့ဆို ကျနော် ကြမ်း ထားလို့ မျက်နှာမှာ လိမ်းထားတဲ့ မှုန်နံ့သာတွေ တစ်စက်မှ မကျန်ဘူးလေ။
နောက်နေ့မှာပဲ အဖေတို့ ပြန်ရောက် လာပြီး မမနဲ့ ကျနော် ဆုံဖို့ အခွင့်ရေး မရသလို မမလဲ သူ့အိမ်က သဘောတူတဲ့ လူနဲ့ လက်ထပ်ပြီး သူ့ယောက်ျား တာဝန်ကျတဲ့ မြို့ကို လိုက်သွားလို့ ကျနော့်ရဲ့ အချစ်ဦးဆိုဆို ကာမ အစ ပြောပြော မမနဲ့ ဇာတ်လမ်းက ပြည့်ဖုံးကားလေး ချလိုက် ရပါတော့တယ်။
ကာလတွေ ဘယ်လောက် ကြာကြာ ပိတောက်ရိပ်နဲ့ စံပါယ်ရုံလေးနား ရောက်ရင်တော့ ရင်ခုန်သံ စည်းချက် ခပ်သွက်သွက် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မမနဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို သတိရ နေမိတယ် ဆိုတာကို ဒီနေရာကနေ ဝန်ခံ လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ။